प्रेम: परिभाषा | Bishow Nath Kharel
‘तिमी जब रातमा निदाउन सक्दैन, त्यतिबेला तिमी प्रेममा हुन्छौ, किनकि अन्तत: तिमीलाई सपनाभन्दा वास्तविकता सुन्दर लाग्न थालेको हुन्छ ।’
— डा. सेउस
‘के तपाईं कहिल्यै प्रेममा पर्नुभएको छ ? भयानक हुन्छ, होइन त ? यसले तपार्इंलाई साह्रै नाजुक बनाउँछ । यसले तपाईंको छाती खोलिदिन्छ, तपाईंको हृदय उघार्छ र यसको मतलब कोही त्यहाभित्र पसेर तपाईंलाई भद्रगोल पारिदिन सक्छ ।’
‘प्रेम आगो हो । तरस यसले तपाईंको हृदयलाई न्यानो दिनेछ वा तपाईंको घर जलाइदिनेछ, केही भन्न सकिँदैन ।’
source : http://www.souryadaily.com/2013/02/14.